Maxay dhibco biyo u sameysmayaan iyo qaabkee ayey yeelan karaan? | Saadaasha Shabakadda
Waxaa hubaal ah inaad waligaa ku dhaygagtay roobka, adigoo ku wareersan oo layaaban sida ay dhibcaha roobku ugu daataan. Dhibco had iyo jeer u eg qaabab wareeg ah ama oval ah iyo in, qof ahaan, waxaad arkaysaa inay u dhacayaan sidii inay yihiin cirbado. Maxay yihiin waxyaalaha qarsoon ee ka dambeeya samaynta dhibcaha biyaha? Maxaa ku hoos qarsoon dhibco yar yar oo biyo ah maxeyna dhibco biyo u sameysmaan?
Hadaad rabto inaad qeexdo dhamaan astaamahan iyo shakiga, sii wad aqrinta 🙂
1 Dhibic biyo ah
2 Maxaa dhibco biyo ah loo sameeyay?
3 Maxay dhibcaha roobku ugu ekaadaan ilmada?
Dhibic biyo ah
Biyuhu waa cunsurka ugu caansan ee ka jira dhulka dushiisa. Biyaha awgeed, nolosha sidaan ognahay way horumari kartaa. Haddii aysan iyada ahayn, webiyaal ma jiri doonaan, harooyin, bad iyo bado toona. Waxaa intaa dheer, ma noolaan karno maadaama aan ka kooban nahay 70% biyo.
Biyaha waxaa laga heli karaa dhammaan saddexda gobol: adag (qaab baraf ah), dareere (biyo), iyo gaas (uumiga biyaha). Isbadalkeeda gobolka wuxuu kuxiranyahay gabi ahaanba heerkulka iyo cadaadiska. Marka kuleylka loo adeegsado barafka, tamarteeda waxay kordhisaa gariirka mowjadaha biyaha ee gudaha ku jira waxayna bilaabaysaa inay dhalaasho. Haddii kuleylkani sii socdo, qurubyadu aad bay u kala soocayaan iyaga oo isu beddelaya gaas. Uumiga biyaha waa uun dhibco yar oo biyo ah. Laakiin ...
Maxaa dhibco biyo ah loo sameeyay?
Markaan tilmaamno molikuyuullada ka samaysan biyaha, waxaan ka dhigeynaa qaab wareegsan oo la mid ah kubbadaha oo la is wada haysto iyadoo la gariirinayo oo la wareegayo Hadday sidaas tahay, maxay tahay sababta ay biyuhu u daadanayaan ugu faafi weydo dhumucda hal mekole? Tani waxay dhacdaa maxaa loo yaqaan kacsanaanta dusha sare. Waad ku mahadsan tahay xiisadda dusha sare ee ka dhexeysa maaddooyinka, waxaan irbad ka dul sabayn karnaa muraayadda ama cayayaanka kabaha sameeya ayaa ku dhex socon kara biyaha.
Si taas loo fahmo, waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa ka socda gudaha dareeraha. Biyaha waxay ka kooban yihiin maaddooyin (molecules) kuwani, iyaguna, waa atamyo. Atam kastaa wuxuu leeyahay dacwado togan (proton) iyo eedeymo taban (elektaroonno) waxayna leeyihiin mid ama qaab kale, waxayna kuxirantahay nooca molekal ee ay sameynayaan. Mararka qaar qolofta elektarooniga ah ayaa si aad ah isu soo jiidanaysa marar kalena borotoonada iyo elektarooniga Sidaa darteed, waxaan ognahay inay jiraan xoog jiidasho iyo dib u celin.
Markaan u kuur galno mekole gudaha dareere ah, waxaan arki karnaa sida ay gebi ahaanba ugu hareeraysan tahay molikuyuullo intaa ka badan iyo halka ay dhammaan xoogagga is-dhexgalka ee jira ay is-baajiyaan Haddii midkood dhanka bidix u toogto, midka kale wuxuu u tooganayaa dhanka midig isla xoogaas, sidaas darteed way is baajinayaan. Tani waxay ka dhigeysaa maaddooyinka ay leeyihiin tamar yar oo aad u deggan. Had iyo jeer raadinta gobolka ugu kharashka yar tamarta dayactirka, waxa kululaada ayaa qaboojiya, waxa aad u sarreeya ayaa dhaca, iwm.
Sheygu wuu dhib badan yahay marka la fiirsanayo molikuyuullada ku jira lakabka sare ee biyaha. Molikuyuulyadan ayaan gebi ahaanba ku meeraysnayn maaddooyin kale. Kaliya waxay ka helaan xoog dhinac, laakiin kama helaan dhinaca kale. Si loo xaliyo dhibaatadan, moleekuleyaashu waxay dib isu dhigayaan iyagoo isku dayaya inay helaan qaab ay ku yareeyaan aagga dusha sare ee ay ku fadhiyaan. Isla mugga, jirka joomatari ee leh aagga dusha ugu yar ayaa ah wareegga.
Sababahan oo dhan awgood, dhibco biyo ah ayaa la sameeyaa markii biyaha lagu shubo qaab wareeg ah ama qaab wareeg ah. Tani sidoo kale waa sababta ay walxaha leh tiro yar oo ka cufan biyaha (sida cayayaanka xarkaha leh) ay sabeyn karaan, maaddaama oogada dusheeda ay u egtahay jabin si loogu oggolaado jirka shisheeye inuu soo galo.
Xiisadda dusha sare ee biyuhu way ka sarreysaa dareerayaasha kale maaddaama joomatariyeedka meykuleedyadiisu ay xagal leeyihiin ayna keenaan xoogag badan oo jira.
Maxay dhibcaha roobku ugu ekaadaan ilmada?
Markii aan sharraxnay sababta ay dhibcaha biyaha u sameysmaan, waxaa la joogaa xilligii la sharxi lahaa sababta dhibcahaasi ay u yeeshaan qaab ilmo ah markay ka soo dhacaan cirka inta roobku socdo.
Badanaa dhibic u eg ilmada ayaa la sawiray. Si kastaba ha noqotee, illaa dhibicyadan ay ku dhacaan daaqad mooyee, ma lahan qaab la mid ah. Dhibcaha roobka yaryar ayaa leh gacan ka yar milimitir, qaabkooduna yahay meher. Kuwii ugu weynaa waxay qaabeeyaan qaab bunbur ah markii ay gaaraan qiimeyaal gacan ka weyn 4,5 mm. Markay taasi dhacdo, dhibcaha ayaa u leexda parachute leh tuubo biyo ah oo ku wareegsan salka waxayna ku faaftaa dhibco yaryar.
Isbeddelkan ku yimid qaabka dhibcaha biyaha waxaa u sabab ah xiisadda laba ciidan oo isku mar wada hawlgalaya. Midka koowaad waa xiisadda dusha sare ee horay loo arkay tan labaadna waa cadaadiska hawada, lakab si aad ugu riixdo salka dhibicda kor markay u dhacdo. Marka dhibicda biyuhu yar tahay, xiisadda dusha sare ayaa ka xoog badan tan cadaadiska hawada, sidaas darteed dhibicdu waxay u egtahay qaab goobeed. Markasta oo cabirka dhibicda biyuhu ay kororto, xawaaraha uu ku dhacayo ayaa kor u kacaya, iyadoo sidaas ay u sii kordhayso xoogga uu cadaadiska hawadu ku dhaqmayo dhibicda biyaha. Tani waxay keenaysaa in dhibicdu qaaddo qaab sasabasho ah isla markaana niyad jab ka dhex abuurmo gudaha.
Marka gacan ka mid ah dhibicdu ay ka badato 4 mm, diiqadda ku taal bartamaha dhibicdu waxay u kordheysaa qaab ay u sameysmeyso bac ay giraan biyo ahi dusha ka saaran yihiin dhibicdan weynna waxaa ka sameysmaya dhowr yar yar.
Macluumaadkan waxaad ku baran kartaa wax yar oo dheeraad ah oo ku saabsan dhibcaha biyaha iyo sababta ay u leeyihiin qaabkaas markay joogaan meelo kala duwan. Hadda waxaad daaqadda ka eegi kartaa aqoon weyn oo ku saabsan curiyaha nolosha na siinaya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Maxay dhibcaha biyaha u sameysmayaan iyo qaabkee ayey yeelan karaan?